Klondike Coin စျေး - အွန်လိုင်း KDC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Klondike Coin (KDC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Klondike Coin (KDC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Klondike Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Klondike Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Klondike Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Klondike CoinKDC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00976Klondike CoinKDC သို့ ယူရိုEUR€0.00828Klondike CoinKDC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00748Klondike CoinKDC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0089Klondike CoinKDC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0882Klondike CoinKDC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0617Klondike CoinKDC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.218Klondike CoinKDC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0365Klondike CoinKDC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0131Klondike CoinKDC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0136Klondike CoinKDC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.219Klondike CoinKDC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0756Klondike CoinKDC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0531Klondike CoinKDC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.732Klondike CoinKDC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.64Klondike CoinKDC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0134Klondike CoinKDC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0148Klondike CoinKDC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.305Klondike CoinKDC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.068Klondike CoinKDC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.03Klondike CoinKDC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11.61Klondike CoinKDC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.69Klondike CoinKDC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.719Klondike CoinKDC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.27
Klondike CoinKDC သို့ BitcoinBTC0.0000008 Klondike CoinKDC သို့ EthereumETH0.00003 Klondike CoinKDC သို့ LitecoinLTC0.00017 Klondike CoinKDC သို့ DigitalCashDASH0.000101 Klondike CoinKDC သို့ MoneroXMR0.000104 Klondike CoinKDC သို့ NxtNXT0.706 Klondike CoinKDC သို့ Ethereum ClassicETC0.00138 Klondike CoinKDC သို့ DogecoinDOGE2.8 Klondike CoinKDC သို့ ZCashZEC0.000104 Klondike CoinKDC သို့ BitsharesBTS0.384 Klondike CoinKDC သို့ DigiByteDGB0.358 Klondike CoinKDC သို့ RippleXRP0.0331 Klondike CoinKDC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000334 Klondike CoinKDC သို့ PeerCoinPPC0.0335 Klondike CoinKDC သို့ CraigsCoinCRAIG4.42 Klondike CoinKDC သို့ BitstakeXBS0.414 Klondike CoinKDC သို့ PayCoinXPY0.169 Klondike CoinKDC သို့ ProsperCoinPRC1.22 Klondike CoinKDC သို့ YbCoinYBC0.000005 Klondike CoinKDC သို့ DarkKushDANK3.11 Klondike CoinKDC သို့ GiveCoinGIVE21 Klondike CoinKDC သို့ KoboCoinKOBO2.26 Klondike CoinKDC သို့ DarkTokenDT0.00899 Klondike CoinKDC သို့ CETUS CoinCETI28